မြင့်မားသောအပူချိန်ဖန်ဖိုင်ဘာအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း China Manufacturer
Glass ကို Fiber Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောအပူချိန် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: Glass ကို Fiber Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောအပူချိန် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > အိတ်-type အမျိုးအစားဖုန်ဖယ်ရှားရေး > မြင့်မားသောအပူချိန်ဖန်ဖိုင်ဘာအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း
Glass ကိုဖိုင်ဘာအိတ် filter ကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့ (ဖုန်မှုန့်) ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့စက်မှု Pulse ဖုန်ကောက်ခံရေးဖြစ်ပါတယ်။ စက် microcomputer PLC ထိန်းချုပ်မှု, မိုးလုံလေလုံဆန့်ကျင်မှုတ်, အချိန်ကိုက်, စဉ်ဆက်မပြတ်ခုခံ, မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး, အပူချိန် detection နဲ့ display ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ဖုန် (သာမန်ဖန်ခွက်ဖိုင်ဘာ filter ကိုအိတ်အဖြစ်လူသိများ) အိတ်များအတွက် Glass ကို Fiber စုဆောင်းခြင်း။ မြေမှုန့်စုဆောင်းမြင့်မားတဲ့အပူချိန်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့အတွက် dedusting ထိထိရောက်ရောက်နှင့် stably နိုင်ပါတယ်။ မီးဖိုထဲ၏ထွက်ပေါက်မှာထုတ်လွှတ်အာရုံစူးစိုက်မှု (ထက်နည်း 50 မီလီဂရမ် / nM3 အထိ) နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားသော 100mg / NM3 ထုတ်လွှတ်စံထက်နိမ့်သည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့ dedusting ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ့်, ရိုးရှင်းလုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးဖြေရှင်းဖို့ထိရောက်သောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Pulse Deduster အလုပ်လုပ်တယ်သောအခါ, မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးဓာတ်ငွေ့ဝင်ပေါက်ကနေပြာ Hopper တွေလည်းဝင်။ လေတိုက်မြန်နှုန်း၏အလျင်၏ရုတ်တရက်တစ်စက်နှင့်တကွ, ကြီးမားတဲ့မြေမှုန့်အမှုန်ဟာ Hopper တွေလည်းသို့တိုက်ရိုက်ကျလိမ့်မည်။ ပန်ကာဒအနုတ်လက္ခဏာဖိအားလက်အောက်တွင်သေးငယ်တဲ့ဖုန်မှုန့်အမှုန်နှင့်အတူဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ်သို့စိမ့်ဝင်သွားတယ်, နှင့်မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တားဆီးနေသည်။ အဆိုပါသန့်စင်သောလေထုပန်ကာအားဖြင့်လေထုထဲသို့ဆင်းသည်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးဟုခေါ်သည်။
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး၏စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ ပို. ပို. မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်မှပူးတွဲပါသည်။ အချို့သော filter ကိုယူနစ်တိုး၏ running ခုခံနှင့်ပြာများဖယ်ရှားရေးလိုအပ်တဲ့အခါ, filter ကိုယူနစ်များ၏ switching အဆို့ရှင်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်လိမ့်မည်။ compressed လေကြောင်းလျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အားဖြင့်စစ်ထုတ်ယူနစ်ဝင်သောနှင့် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုန်မှုန့်မှုတ်။ ထိုအခါအဆို့ရှင်ပန်းကန်ပွင့်လင်း, filter ကိုယူနစ် rework အကူးအပြောင်း, ပြာသန့်ရှင်းရေးလာမယ့် filter ကိုယူနစ်မှဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
1) ထိရောက်မှုဖယ်ရှားအဆိုပါမြေမှုန့် 99.9% ကျော်သည်နှင့်ထုတ်လွှတ်အာရုံစူးစိုက်မှု 30mg / Nm3 ထက်လျော့နည်းသည်။
2) 1000mg / Nm3 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမြင့်သိပ်သည်းဆဖုန်မှုန့်လေကောင်းလေရရှိနိုင်ပါသည်။
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြာ clean နှင့်ပြေးခုခံသေးငယ်သည်နိုင်သည့် 3) ဟာ Off-Line သွေးခုန်နှုန်းသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်း။
4) ဒါဟာတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်, အလိုအလျောက်နှင့်အနိမ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်မားဒီဂရီရှိပါတယ်။
အဆိုပါ flue ဓာတ်ငွေ့အပူချိန် 60 ~ 300 ဒီဂရီ C ၏အကွာအဝေးအတွင်း fluctuates, နှင့် flue ဓါတ်ငွေ့များ၏အစိုဓာတ်ကိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်.4မှ 12% ဖြစ်ပါတယ်။ dewing နှင့်အိတ်, အဖြစ်ကင်ဆာမတော်တဆမှုမြင့်အပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ထံမှ deduster တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါဆောင်ရွက်ချက်များယူနေကြသည်။
(နှစ်ခု) အပူချိန် detection နဲ့အလိုအလျောက်နှိုးဆော်သံ device ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း၏လေကြောင်းဝင်ပေါက်နှင့်အိပ်ဇောဆိပ်ကမ်းကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အဆိုပါအိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအပူချိန်၏အကွာအဝေးထက်ကျော်လွန်တပြိုင်နက်, နှိုးဆော်သံထုတ်ပေးနေသည်နှင့်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Glass ကို Fiber Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောအပူချိန် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster , စက်မှု Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , MC Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , ZC Flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , ဆိုက်ကို Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှု electrostatic Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး